Azia Atsimo: Holi, Fampakarambady, Bollywood, Ranomandry, sns… · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo: Holi, Fampakarambady, Bollywood, Ranomandry, sns…
Voadika ny 04 Septambra 2017 3:07 GMT
Arahabaina isika rehetra mpamaky nahatratra ny Holi. Ny fetiben'ny loko fanaon'ny Hindò rehefa lohataona no isan'ny fetibe nentindrazany tena malaza indrindra any India sy Nepal. Lazain'ny South Asia Biz hoe ny tarika Indiana mpilalao Cricket, izay tany Karaiba tamin'io fotoana io hiady izay ho tompondaka erantany amin'ny Cricket, dia nakalaza ny Holi niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina indiana tao an-toerana.
Ananantsika ihany koa ireo lohahevitra maro samihafa resahana any anatin'ireny bilaogy any Azia Atsimo ireny:
Nazia Hussein avy amin'ny Adhunika blog no manasongadina ny fanao mahazatra amin'ny fandaniana mihoam-pampana rehefa maka vady, izay lasa vesatra ho an'ny fianakaviana. Jereny hoe hatraiza no fetra tsy tokony hihoarana.
Vao haingana tao Dhaka no nisy tranobe manaka-danitra nirehitra ary nahafaty olona dimy sy nampisahotaka be, ary olona betsaka no nanatri-maso ny asa fanavotana nampivarahontsana teny an-toerana. Ny bilaogy Drishtipat no nandefa ny fitantaràna nataon'ireo nijoro ho vavolombelona tamin'ilay loza mahatsiravina sy ny tsy fisian'ny fepetra fiarovana mba hisorohana ny karazana loza tahaka izany.
Ugyen avy amin'ny bilaogy Visit Bhutan tamin'ny 2008 no mizara lahatsary iray mampitolagaga ny fipetrahan'ny fiaramanidina iray an'ny Druk Air, Royal Bhutan Airlines tao Paro, ilay hany seranam-piaramanidina any amin'ny faritry ny Fanjakana Himalayan ao Bhutan.
Lost ao amin'ny Kuzu-Bhutan Weblog indray manoritsoritra ireo tombony azo amin'ny fampiasàna ny tenin'ireo ao Bhutan any anaty fifampiresahana amin'ny aterineto.
Shivam VJ nanoratra lahatsoratra iray misy antsipirihany mampiseho ny fifamatorana misy eo amin'ny tontolon'ny bilaogy indiana sy ny media indiana, raha i Kiruba Shankar kosa indray manasongadina (fanamarihana: simba ny rohy mankany amin'ny lahatsoratra) ny lahatsoratr'ilay bilaogera Amit Agarwal tao amin'ny Hindustan Times izay nanasongadinana ihany koa ity Indiana sangany amin'ny fandefasana Podcast ity.
Lasa malaza erantany tokoa ny Bollywood. Nanoratra ny zavatra niainany manokana an'ilay sarimihetsika iray vaovao navoakan'ny Bollywood tany amin'ireo tanibe telo i Steven Baker tao amin'ny Desicritics (Fanamarihana: simba ny rohy mamoaka ny lahatsoratra).
Tao anatin'ny 62 taona, sambany i Kathmundu no nahita maso ny ranomandry voalohany tonga tao aminy. Dinesh Wagle avy amin'ny United we Blog no manoritsoritra ny fihetsehampon'ireo Nepaley.
Velom-panantenana i Dr. Gaury S. Adhikary momba ny hoavin'i Nepal. Na eo amin'ny kihondàlan'ny tantarany aza ny politika ao Nepal, feno toky izy fa miaraka amin'ny faharetan'izy ireo sy ny fahendreny, hitondra ny politika Nepaley hiverina amin'izay tena toerany ireo vahoaka Nepaley: ho eo Afovoany!
Miverina indray ilay fetibe Basant malaza ao Pakistàna, na ny fetiben'ny papango rivotra manamarika ny fahatongavan'ny lohataona. Shirazi avy amin'ny Light Within sy Hasan avy amin'ny Lahore Metblogs no manana antsipirihany amin'ireo fankalazàna ireo. Tsy dia nanelingelina loatra ny firehetampon'ireo olona tao Pakistàna ny lalàna napetraky ny manampahefana momba ny filalaovana papango rivotra.
Adil Najam avy amin'ny All Things Pakistan manome ny lisitry ny sasany amin'ireo boky malaza ao Pakistàna.
Resahan'i Scourge ny amin'ireo fiara fitateram-bahoaka ao Sri Lanka.
Ampahafantarin'ny “Pass the roti on the left side” fa misy ireo tatitra momba ny fakàna ankeriny sy fanjavonan'ny ankizy maro ao Sri Lanka. Voalaza fa ampiasaina ho toy ny mpiady ireny ankizy ireny.
Lanka Libertarian miresaka ny fanokanana ankizy ataon'ireo Moanina Bodista ary milaza fisianà fanitsakitsahana zon'olombelona.